आवश्यक परे कांग्रेस सडक आन्दोलनमा जान्छ: रामचन्द्र पौडेल (भिडिओ) :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
आवश्यक परे कांग्रेस सडक आन्दोलनमा जान्छ: रामचन्द्र पौडेल (भिडिओ)
चुनाव सरकारको नाटक हो, नाटक गरिरहेको छ
विवेक राई काठमाडौं, माघ ३०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सशक्त ढंगले विरोध नगरेको आम आरोप छ। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेस के गर्दैछ? यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सेतोपाटीका प्रशन्न पोखरेल र विवेक राईले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
अहिले संविधान मिचिएको छ, च्यातिएको छ। संविधान र लोकतन्त्र कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो हुनुपर्ने हो। अहिले कांग्रेस के गरिरहेको छ?
प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको कदम पूर्ण रूपले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक छ।
निरंकुशतातर्फ र सर्वसत्तावादतर्फ जान लागेको हो भनेर कांग्रेसले देशभर विरोध गरेको छ। अदालतमा मुद्दामा सुनुवाइ जारी छ। न्यायमूर्ति अदालतमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेपाल आमाका छोराछोरी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले संविधान पढ्नुभएको छ।
संविधानभन्दा बाहिर उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्न भन्ने अझै पनि हामीलाई विश्वास भएकाले अब हामीले केवल ध्यानाकर्षण र प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोलेको हुनाले अदालतलाई दबाब दिन्छौं भनेर हामीले प्रतिवादका रूपमा राष्ट्रव्यापी विरोध जनाएका छौं। यो असंवैधानिक भएकोले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले प्रष्टसँग विचार अगाडि ल्याइसकेको छ।
सत्तामा पनि नेकपाको ओली समूह छ। सडकमा पनि नेकपा छ, प्रचण्ड-नेपाल समूह। कांग्रेस कहाँ छ भन्ने आम जनताको प्रश्न छ?
कम्युनिष्टहरू जतासुकै देखिनु हुन्छ, तर सारमा काम केही पनि हुँदैन। त्यसकारण प्रचार र हाउगुजीमात्रै कम्युनिष्ट रहेछ भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझ्दैछन्।
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भन्यो। तर केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा पुनर्स्थापना भन्ने शब्द किन राखेन?
त्यो निर्णय लेख्नेले लेख्दा कताकति भयो होला। तर मूल आशय असंवैधानिक र यसका लागि विरोध प्रदर्शन गर्ने भनिएको हो। जुन मन्तव्य लिएर विरोध गर्दैछौं त्यसको गन्तव्यचाहिँ पुनर्स्थापना नै हो। यसमा कुनै द्विविधा छैन।
त्यसो भए सडक आन्दोलनमा जान कांग्रेसले किन खुट्टा कमाइरहेको छ?
आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा कांग्रेस जान्छ। अब सडक आन्दोलन गर्न पर्ने नै भयो भन्ने महशुस भएपछि र न्यायालयतिरबाट पनि आशा मरिसकेपछि हामी जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि अगाडि बढ्छौं।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई त संविधान चाहिएन। उहाँहरूले संविधान नमान्ने। अब अदालतले पनि संविधान नमान्ने हो भने यो संविधान कसले मान्ने?
अदालतको निर्णयलाई पर्खनेबारे तपाईं र सभापतिका कुरा मिलेको छैन नि!
सभापतिका बारेमा मिडियामा म धेरै भन्न चाहन्न, त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। सभापतिले के भन्नु भएको छ उहाँसँगै एकपटक सोध्नुस्। प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक भन्नुभएको छ, यो असंवैधानिकलाई संवैधानिक गर्ने कुरा के हो त्यो उहाँलाई नै सोधे जाति हुन्छ। मलाई किन विवादमा पार्ने?
सभापतिलाई त्यस्तो केही अफर आएर उहाँ मौन बस्नुभएको हो कि!
त्यो उहाँले जान्नु हुन्छ। उहाँलाई केही थाहा होला नि त। केही भएदेखि उहाँले बुझ्ने कुरा हो मैले भन्ने कुरा होइन।
तपाईंसँग सभापतिको सल्लाह हुँदैन?
मसँग सल्लाह गरेर यस्तो उभद्रो गरेको हुन्छ र?
अर्कोतर्फ संवैधानिक नियुक्तिहरूमा कांग्रेसले भागबन्डा लिएको भन्छन्
वनमा बाघ कराउनु खोरमा बाख्रो हराउनुजस्तो केही परिवन्ध परेको हुन सक्छ। संवैधानिक परिषद भनेको के हो? सरकारलाई सन्तुलनमा ल्याउने शक्ति हो।
ऐन नै बदलेर अध्यादेशबाट असंवैधानिक तरिकाबाट जुन ऐन परिवर्तन गरियो र कोरमको कुरा गरियो त्यो नै आपत्तिजनक हो। त्यसबाट नियुक्ति भएका पनि आपत्तिजनक हुन्। यस्तो असंवैधानिक कामलाई संसदले स्वीकार्दैन भनेर संसद नै भंग गरिदिने योभन्दा ठूलो अपराध। एउटा अपराध लुकाउनलाई अर्को ठूलो अपराध गर्ने?
कांग्रेसका तर्फबाट ११ जनाले संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति लिएका छन् भन्ने छ
कोही छैन। पार्टीको केही थाहा छैन हामीलाई। कांग्रेसलाई थाहा छैन। व्यक्ति विषेश को-कोलाई थाहा छ उनीहरू जान्दछन्। तर हाम्रो पार्टीलाई थाहा छैन, त्यो नियुक्तिप्रति हाम्रो पार्टी अनभिज्ञ छ।
आकलझुकल सडकमा चारतारे झण्डा देखाउने अनि नियुक्तिमा भागबन्डा लिने मिलिभगत छ कि भन्ने आशंका छ!
सडकमा साथीहरू जानुभएको छ। हामीले जे बोलेका छौं, इमान्दार कुरा बोलेका छौं। हामी हाम्रो सिद्धान्त, आस्था र जीवनभर के को लागि लड्यौं, मिशन के हो त्यसको लागि हाम्रो अभिव्यक्ति छ। यसमा कुनै बनावटी छैन। विरोध प्रदर्शनहरू गरेका छौं। यसमा कतै छलकपट छैन। शान्तिपूर्वक लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि हामीले खबरदारी गरेका छौं।
सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो भनेर कांग्रेसले गर्व गर्छ। त्यही संविधान च्यातिँदा, कुल्चँदा पनि चुप लागेर बस्ने?
हैन-हैन, संविधान च्यातिँदा हामीहरू चुप लागेर बसेका छैनौं, बस्दैनौं। संविधानको रक्षा हामी गर्छौं।
अहिलेसम्म हामी अदालतकै भरोसामा छौं। हामी संविधानको पक्षमा छौं भनेर आफ्नो धर्म निभाइरहेका छौं। एउटा परिस्थिति आयो भनेदेखि यो संविधान रक्षाका लागि हामी जुनसुकै किसिमको कदम चाल्छौं। अहिले कदम चाल्नुपर्ने अवस्था भइसकेको मलाई लाग्दैन।
त्यो अवस्था कहिले आउँला?
अदालत, निर्वाचन आयोग जतासुकैबाट आशा मरिसक्यो भन्ने परिस्थिति देखिएपछि यो अवस्था आउन सक्छ। संविधान पुरै काम नगर्ने गरी अधिनायकवादतिर देश गयो भन्ने जुन दिनमा टुंगो लाग्ला, त्यस दिन हामी आफ्नो कुरा गर्छौं।
त्यसबेला एक्लै आन्दोलनमा जान्छ कि, अरू पार्टीको साथ खोज्छ?
हामी मैदानमा उत्रन्छौं। हामीलाई सहयोग गर्न आउनेलाई सहयोग नगर भन्दैनौं।
प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आइराखेको छ। बागमती र प्रदेश नम्बर १ मा नेकपाभित्रबाटै अविश्वास प्रस्ताव आएको छ। त्यहाँ कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव समर्थन वा विरोध के गर्ने गर्न सकेन
प्रधानमन्त्री असंवैधानिक काम गरिराख्नुभएको छ। जुन सरकार जुन प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको पृष्ठपोषक र संरक्षक भइरहेको अवस्थामा छ त्यस्तोको नजिकमा र पक्षमा हाम्रो मत जाँदैन। समर्थन हुँदैन।
सभापतिले तपाईं नै उपस्थित बैठकमा जसले मुख्यमन्त्री दिन्छ उसैलाई समर्थन गर्ने हो भन्नुभएको थियो
दुई चारवटा पद लिन, सत्ता भोग गर्न, सुखसयल र फाइदाका लागि मात्रै कांग्रेस राजनीतिमा लागेको होइन। म त त्यसरी लागेको भए त राजाका पालामा मन्त्री हुन्थें होला जेल जानु पर्थ्यो र? हामी त सिद्धान्तमा अडिएर काम गर्ने हो। हाम्रो नीति प्रष्ट हुनुपर्छ। पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शसँग तालमेल खाने नीति लिएर कांग्रेसले काम गर्छ।
कांग्रेसको नीति एकढिक्का छैन भन्ने त केन्द्रीय समितिमै कोही चुनाव, कोही पुनर्स्थापना र संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्छन्
हैन-हैन, पुनर्स्थापना त सबैले भनिरहेको हो। संविधानको रक्षा र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना एकै कुरा हो।
प्रजातन्त्रमा चुनाव त हुन्छ तर चुनावको पनि समय हुन्छ। आवधिक निर्वाचनलाई हामीले मानेकै छौं। संविधान मिचेको कुरा त पो हामी मान्दैनौं।
सरकारले त चुनावको तयारी थालेको छ
नाटक हो, यो सबै नाटक गरिरहेको छ। यति ढाँट्ने, जनतालाई धोका दिने, यति ठूलो झुक्याउने कोही हुन्छ पृथ्वीमा? तर ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन, एक दिन पर्दाफास हुन्छ।
पार्टीको कुरा पनि गरौं। केन्द्रीय समिति बैठक माग गर्नुभएको छ तर सभापतिले सुन्नुभएन होइन त?
धेरै कुरा अनुत्तरीत भइराखेको, जनतालाई पनि के हो के हो जस्तो परिस्थिति र अन्यौलको स्थिति सिर्जना भएकोले हाम्रो पार्टीले अन्यौलको स्थिति चिर्दै जानुपर्छ भनेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चाँडै बस्नुपर्छ भनेर मैले भनेको हुँ।
हाम्रो महाधिवेशन पनि आउँदैछ। यो सरकार जथाभावी गर्दैछ। सरकारले निर्वाचनमा गएँ भन्ने अनि जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने भइरहेको छ।
यस्तो बेला कांग्रेस बैठक बसेर सरकारले बदमासी गरेको छ भने खबरदारी गर्ने जरूरी छ। त्यसैले बैठक तत्काल बोलाऔं भनेको हो।
सभापतिले विज्ञप्ति निकालेर कार्यकाल थप्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
विज्ञप्तिले कार्यकाल थपिएला भन्ने कुरा त मान्न सकिन्न। त्यसपछि उहाँ सभापति रहनु हुन्न। आफैँले आफैँलाई घोषणा गरेर कोही सभापति हुँदैन। सभापति अरू पनि भइदिन्छन् अनि पार्टी के हुन्छ नि? त्यस्तो अवस्था कहाँ हुन्छ?
अब महाधिवेशन कहिले हुन्छ?
पार्टीको बैठक तुरून्तै बस्छ, त्यसले विकल्प प्रस्तुत गर्छ। संविधान बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने काम सँगसँगै गर्छौं। यो बर्खाअगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्‍यो।
भावी नेतृत्वबारे केही तयारी छ कि!
हामी सामुहिक नेतृत्वको धारणासँग प्रतिवद्ध छौं। समय आएपछि कसलाई सभापति उठ्ने भन्ने समयमै बाँडफाँड हुन्छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २९, २०७७, २३:४८:००